Olon-tokana nividy ny tany tamin’ny orinasam-panjakana iray tamin’ny taona 1986 tamin’ny sarany 770.000 Ar no mikasa haka ny tany indray, rehefa resy teny amin’ny fitsarana, hoy ireo mponina nanao fihetsiketsehana, omaly. Efa taona marobe talohan’io no nisy nipetraka io tany io izay marihina fa ana hektara maro ary efa saika nisy trano avokoa nipetrahan’ireo razamben’ireo mponina ary manana taratasy ara-dalàna. Tsy nijanona ny ady fa nifandimby resy sy naharesy ny roa tonta. Volana vitsy lasa izay dia nahazo “pourvoi pour l’intérêt de la loi” tamin’ny fitsarana ireto mponina ireto, izany hoe efa manaiky ny fandresena. Fotoana fohy taorian’izay anefa dia naharay taratasy hafa avy amin’ny fitsarana indray izy ireo izay manome vahana io olon-tokana nividy ny tany tamin’ny taona 1986 io ary mandrahona ny handrava ny tranon’ireo mponina mihitsy. Nisy ny fidinan’ireto farany an-dalambe, omaly, manohitra amin’ny heriny feno io taratasy tonga eo am-pelatanany io.